October 25, 2009 at 5:31 pm2comments
ဆရာမြသန်းတင့် က ၁၉၄၅-၅၀ တစ်ဝိုက်လောက်ကတည်းက ဂျာနယ်ကျော်မမလေးနဲ့ လူချင်းခင်မင်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ၁၉၅၉ မှာ နောက်အိမ်ထောင်ပြုပြီးတော့လည်း သူ့နောက်အိမ်ထောင် ဦးအောင်ဇေယျနဲ့ က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ကတည်းက ခင်မင်ခဲ့ကြတာမို့ စာပေမိတ်ဆွေသဘောမက ပုဂ္ဂ္ဂိုလ် ချင်း မိသားစုချင်းပါ ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေး ပုံစံမျိုး လို့ ရေးထားပါတယ်။
ခြုံပြောရရင် ဒီစာအုပ် ကလေးဟာ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့  ဘ၀ခရီးအတက်အကျတွေကို ဘက်မလိုက် အမှန်အတိုင်း ဘေးလူတစ်ယောက်က မြင်တဲ့အတိုင်းရေးထားလို့ မရွှေမိ အတွက် တော့ ဒီနေ့ ထိပြန်ပြန်ဖတ်နေမိတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ။ အလွတ်ရသလောက်တောင်ရှိနေပြီ။ 😛
ဒီလောက်ဆို မရွှေမိရဲ့ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ဋီကာ ပြီးသင့်ပြီပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် မပြီးသေးပါဘူး 😛 မရွှေမိပြောခဲ့တယ်လေ ။ တခုခု ကိုကြိုက်မိပြီ ဆို အသဲအသန် လုပ်တတ်ပါတယ်ဆိုတာ ။
ဆရာမကြီးအကြောင်း နောက်တပုဒ်ဆက်ရေးပါဦးမယ်။ 😛
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး …မေတ္တာပန်းပွင့် …အစ်မကြီးဂျာနေဂျို..ပန်ချာပီမိန်းမချောနဲ့ တူတဲ့စာရေးဆရာမ (အပိုင်း ၁ )	မရွှေမိ သိသလောက် ဂျာနယ်ကျော်မျိုးဆက်များအကြောင်း တစေ့တစောင်း
1. Anonymous | June 1, 2014 at 5:25 pm
2. DD | June 10, 2010 at 2:56 pm